'Ukuvalwa kotshwala ngamaSonto kuzolimaza umnotho' | News24
'Ukuvalwa kotshwala ngamaSonto kuzolimaza umnotho'
Johannesburg - Inhlangano emele izinkampani ezikhiqiza nezidayisa utshwala eNingizmu Afrika, i-Association for Responsible Alcohol Use (ARA), ithi ngeke ihambisane nokuvalwa kokudayiswa kotshwala ngamaSonto ngoba lokho kuzoba nomthelela ongemuhle emnothweni.
Lesi ngesinye seziphakamiso ezifakwe kwiNational Liquor Policy.
Okhulumela inhlangano, uMichael Mabasa, uthi lo mthetho kumele ubhekwe ngeso elibukhali ukuze ungadali umonakalo obungahlosiwe.
Funda nalolu daba: Kuzozwela kakhulu eGauteng ukwenyuka kukaphethiloli
Ekhuluma ohlelweni iMorning Live, uMabasa uthe imboni yezokuvakasha izolimala uma kuvalwa ukuthengiswa kotshwa ngamaSonto.
Kodwa ithe iyayamukela imizamo kahulumeni yokunqaba ukuphuza utshwala ngokweqile.
Imithetho emisha yotshwa ingase yenze ukuba kujeziswe abanikazi bamathaveni nabakhiqizi botshwa ngokuziphatha kwamakhasimende adakiwe, okubalwa kukhona nezingozi ezidalwa abantu abasuke phedakiwe, kubika iSABC.